Madaxawayanaha DDSI Iyo Gudoomiyaha Xisbiga Oo Kulan Layeeshay Capinetka Iyo Shir ka dahacay Hoolka SMCX. - Cakaara News
Madaxawayanaha DDSI Iyo Gudoomiyaha Xisbiga Oo Kulan Layeeshay Capinetka Iyo Shir ka dahacay Hoolka SMCX.
Jigjiga(CN) Arbaco-27-August-2014, Xukuumada DDSI ayaa u heelan dardar galinta hawlaha horumarka iyo xoojinta guulaha lagaadhayo sanadba sanadka ka danbeeya gaar ahaan afartii sano ee ugu danbaysay. Hogaaminta sare ee xukuumadan ayaa ah mid ka duusha qorshe iyo rabitaanka shacabka islamrakaana dardar galisa talaabooyinka ku haboon qorshayaasha horumarineed ee sanadkasta.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo Gudoomiyaha xisbiga ahna Afhayeenka baarlamanka DDSI mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayaa maanta kulan kulayeeshay xubnaha capinetka xarunta madaxtooyada. Sidoo kalena waxaa shir isku u jeedo ah ay Madaxwaynaha iyo gudoomiyuhu kula yeesheen qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dawlada madasha shirarka ee Sayyid Maxamed Cabdille Xasan.
Shirkan oo ay ujeedadiisu ahayd dar-dar galinta adeega shacabka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxwayne kuxigeenada, wasiirada, agaasimada iyo dhamaanba shaqaalaha kala duwan ee dawlada. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud ayaa sheegay in shacabku markasta u baahanyahay adeeg hufan islamarkaana shaqaalaha looga baahan yahay in ay laba jibaaraan adeeg kasta oo ay shacabka u fidinayaan. Sidoo kale gudoomiyaha Xisbiga mudane Maxamed Rashiid ayaa shaqaalaha ku booriyay sidii ay shacabkooda ugu laban laabi lahaayeen adeega shaqo ee uu xilku uga saaranyahay.
Saddexda Madaxwayne kuxigeen ee kala ah mudane Cabdixakiim Cigaal Cumar, mudane Cabdifataax Maxamed Xasan iyo Mudane Cabdulaahi Yuusuf Weerar oo iyaguna ka hadlay ayaa sheegay in shaqaaluhu ay yihiin cududa hirgalinaysa qorshayaasha dawlada islamarkaana ku adkeeyay in ay waajibaadkooda kasoo baxaan gaar ahaan qorshayaasha 2007-da ee maamulka suuban, horumarka iyo nabadgalyada si looga midho dhaliyo yoolka 2007-da.
Sidoo kale waxaa Jaho(direction) laga siiyay shaqaalaha geedi socodka sanadka cusub ee 2007-da ee Tirsiga Itoobiya. Waxayna ugu danbayntii shaqaalahu balan qaadeen in ay kasoo baxayaan dhamaan waajibaadkooda shaqo islamarkaana ay laban laabi doonaan adeega hufan iyo u shaqaynta shacabkooda.
Kulamadan iyo shirarkan ayaa lafaliyaa inay dar dargaliyaan islamarkaana ay ku dhamaystirmaan mashaariicaha horumarku wakhti yar oo ku beegan rubuca koobaad ilaa rubuca labaad ee sanadkan bilowga ah, maadaama ay xukuumadu diirad saartay habsami usocodka hawlaha horumarka iyo tayada adeega bulshada. Waxayna qorshayaashani hiigsanayaan in uu kor u kaco dhaqaalaha, horumarka iyo nabadgalyada deegaanku in kabadan sanadka dhamaaday ee 2006-da.